Indlela yokudibanisa ye-Assay kufuneka igqitywe ngokobume besampulu, kunye nenani leendawo ezahlukeneyo zokuhlawula kufuneka zibalwe ngokobubanzi be-acidic ye-asicic. Kwaye iisampulu zenzekile, zibeke ekubethekeni kwaye zixhase iiRegents kunye neesampulu zesipuni ezivuselelayo, kwaye zishukumise kancinci i-suble amasuntswana enxibelelene.
Ukuba iqulethe i-sulfure, faka izikhonkwane zentsimbi efunekayo kwaye yongeze umaleko wearhente yokugubungela. Xa iqondo lobushushu leziko lombane liyenyuka ukuya kwi-800 ° C, i-C, i-C, i-SOSSE ifakwe kwiziko, kwaye ubushushu bemililo bunyuswe ukuya kwi-1150 ° C ngaphakathi kwemizuzu eli-10 ukuya kwi-10 ukuya kwi-Looces.
Ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo ze-ore, indlela yokuthambisa izithako zegolide ukwahlukile. Ngokohlobo lwe-ore kunye nezithako, zintathu iindlela zezithako kwindawo yokunyibila enqamlezileyo: Indlela yomgubo, i-sodium yendlela ye-code okanye indlela yentsimbi.
1. Indlela yomgubo yeyona ndlela isetyenziswayo isetyenziswayo. Xa isampulu ngokwayo ayinayo okanye inciphise amandla amakhulu, kufuneka wongezwe njengearhente yokunciphisa. Le ndlela inezibonelelo ezininzi. Ingalawula ubungakanani beqhosha elikhokelayo. Inoluhlu olubanzi lwee-mbows ezisebenzayo kunye nezixhobo, kwaye zilungele i-asicoted are, i-carbonate ore kunye ne-oxide ore. I-ore ored ore emva kokuba i-ore ye-sulfide ihlawulwe ukususa i-sulfur inokusetyenziswa kule ndlela.
Iimfuneko zokubhengezwa kweesampulu ezisekwe kwi-osibindicate zezi:
(1) I-acidic ye-silicic ye-slag ngu-1.5-20;
(2) ubunzima be-30-50g yesampulu;
(3) yongeza i-sodium carbonate njengenani lesampulu;
(4) isixa se-borax esongezwe yi-0.2 ukuya kwi-0.3 amaxesha isixa sesampulu;
(5) Isixa se-oxide esikhokelayo akufuneki sibe ngaphantsi kwe-30G kubunzima beqhosha elikhokelayo.
(6) Isixa somgubo kufuneka silingane no-30- (ubungakanani besampulu
I-Oxide Ore kunye ne-carbonate yiminerals ye-alkaline, kwaye indlela yabo yokudibanisa iyafana nesampulu yesiliko. Umahluko kukuba iimveliso emva kokunyibilika zizinto zonke ezifana ne-cao, i-MGO, iqondo elikhulu leSio2, i-MGOO2, kwaye i-CAMO2 iphezulu. Isixa se-PBO kufuneka sonyuswe kwizithako ukuba sandise ubume be-PBSO2 kwi-Slag kwaye unciphise ubushushu bokunyibilika.
2. Indlela yentsimbi (I-Sodium Nitate-Code) Indlela yentsimbi ayifanelekanga kwi-ore ye-sulfide equkethe ubhedu, i-nickel, i-arsenic, i-arsenic, i-picken, i-picken kunye ne-piclena (i-picle) i-SPHEATRICE ye-SPOSPUS (ZNS) kwaye i-PYITER (i-FS2) isebenzisa i-iron yensimbi njenge-Arhente yokuKhangela ukubola i-Sulfide kwisampulu, kwaye isebenzise i-fulfide, kwaye isebenzise i-fur okanye i-fe (kunye ne Isikhonkwane sesinyithi sikwasebenza njengearhente yokucutha, ukunciphisa i-oxide ukuya kuthi ga kwi-Metallic kukhokelo, kunye nokuzibamba izinyithi ezixabisekileyo. Ukuba isampulu iqulethe ubhedu, i-nickel, i-archic, i-antimony, i-bismuth kunye nezinye izinyithi kwindawo yokuncitshiswa ngaphambi kokuba inyibilike, i-iron iya kuncitshiswa kwi-iron, ingenele i-alloy ekhokelayo. Ke le ndlela ayilungelanga iisampulu ezinjalo.
Umgaqo-nkqubo wezithako wezipikili:
(1) Asidi silicic le zeBlack otyhidiweyo 0.5;
(2) Ubungakanani sodium carbonate kukuphinda-2 ukuya kwezi-3 imali isampula;
(3) Ubungakanani oxide yipeyinti 30 ukuya 35 g;
(4) ) Isixa yeboraksi wongezelela ngu 1/2 ukuya 1/3 we-mali isampula;
(5) Isixa isampuli yi-20 ukuya 30g.
indlela 3.Saltpetre yindlela kugecwa nokuhlawulwa iisampulu ngamandla kakhulu ekunciphiseni. Igcwala potassium Nitrate isetyenziswa ukuba buthathaka amandla kuncitshiswa kwisampulu, khon 'ukuze bafumane ukhokelo iqhosha yimilinganiso efanelekileyo, ukuze isiphumo lokubamba amatye anqabileyo ilungile
Izithako Umgaqo indlela saltpeter:
. I-sutterpeter akufuneki idlule kwi-25g.
. Amandla okunciphisa ngaphezulu kwe-30 ngamaxesha ali-12, kunye namandla okunciphisa ngaphantsi kwe-30 ngamaxesha ali-14.
(5) Umthamo we-borax awungaphantsi kwe-5g.
Kuyimfuneko ukusebenzisa indlela yokubala ukwenza izithako kumsebenzi we-asis, kodwa kusoloko kunzima ukwazi umxholo wokuqulunqwa kwesampulu yesampuli ethunyelweyo, efuna ukubonwa kwamehlo. Okokuqala jonga umbala kunye nomgangatho wesampulu, chaza ukuba loluphi uhlobo lwe-Ore yeyodwa, kwaye uthathe isigqibo sokuba yeyiphi indlela e-Assay.
YANGAPHAMBILI Fire Uvavanyo theory kunye nendlela
Umgaqo osisiseko we-Assay Fire (imigaqo-nkqubo yendlela) OKULANDELAYO